Umdlalo kaGoogle kaDinosaur: uyidlala njani kwi-Intanethi, kwiselula yakho okanye kwiPC | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Tutorials, Videogames
Ngokuqinisekileyo nonke, okanye ubuninzi bakho, unayo kwi-smartphone yakho omnye umdlalo kuba xa unyanzelwa ukuba ulinde imizuzu embalwa, xa uhamba ngezithuthi zikawonke-wonke, xa usiya ngasese ...
Ixesha elingaphezulu, kuya kwenzeka ukuba udikwe ngumdlalo kwaye ujonge ezinye iindlela. Kodwa ukuba akunjalo, kuba ufuna ukuba ibhetri ye-smartphone yakho ihlale ixesha elide ngaphandle kokuyeka ukudlala, ungayisebenzisa Umdlalo weGoogle dinosaur, umdlalo ofakwe ngokwendalo kwisikhangeli seChannel.
Umdlalo we-dinosaur kaGoogle uqalile njengendlela ehlekisayo kwisikhangeli seChannel ukusazisa ukuba asinalo uqhagamshelo lwe-intanethi, njengakwiminyaka yeedinosaurs, kodwa sigqithisile. Le dinosaur ngokwenene ngumdlalo, umdlalo olula kakhulu apho Sazibeka ezihlangwini zedayinaso kwaye kufuneka sitsibe ngaphezulu kwemiqobo, ekuqaleni i-cactus, kodwa njengoko siqhubela phambili, ukongeza kusihlwa sikwafumana ii-pterodactyls kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo, ngamanye amaxesha kuyakufuneka sitsibe ukuze siziphephe okanye sihlale siqinile emhlabeni, njengoko sinako jonga kwi-GIF apha ngasentla.
Kwaye nditsho abo baqhubele phambili kakhulu, kuba ekuqaleni umdlalo uyabandakanyeka, kwaye okuninzi, ngenxa yobunzima bayo, kuba njengoko uqhubeka, isantya sedayinaso siyanda eya kusinyanzela ukuba sibale ngokuchaneka ngakumbi xa siqala ukwenza ukutsiba ukuze kungangqubani nezithintelo.
T-Rex, njengoko lo mdlalo unikwe igama, ayifumaneki kuphela kumaqonga eselfowuni eGoogle Chrome, kodwa ikwafumaneka kwiinguqulelo zesikhangeli sikaGoogle sedesktop. Nangona kuyinyani ukuba lo mdlalo uboniswa ngokuthe ngqo kuthi xa singenawo unxibelelwano lwe-Intanethi, akufuneki ukuba sikhuphe kwihlabathi liphela ukuze sikwazi ukudlala nawo.
1 Amaqhinga okuqhubela phambili kangangoko kwiT-Rex
2 Ungayidlala njani umdlalo wedinosaur kwi-Android
3 Ungadlala njani umdlalo wedinosaur kwi-iPhone / iPad / iPod touch
4 Udlala njani umdlalo wedinosaur kwiPC / Mac
Amaqhinga okuqhubela phambili kangangoko kwiT-Rex
Ukuba umbono wethu kukudlala nge-smartphone okanye ithebhulethi, kufuneka sikhumbule ukuba asinalo iqhinga esinalo, ngenxa yoko kuya kuxhomekeka kubuchule bethu xa kubalwa xa kufuneka senze ukutsiba okungqinelanayo.
Kuzo zombini iinguqulelo eziphathwayo kunye nohlobo lwe desktop, amandla okutsiba aya kuxhomekeka kwixesha lokucinezela isitshixo, ke ukuba sicinezela sibambe isitshixo sendawo, izatsiba ixesha elide ukuba singacinezela kube kanye ngokukhawuleza.
Nangona kunjalo, ukuba sidlala kwikhompyuter, izinto zilula kakhulu, kuba singasebenzisa iAlt to nqumama umdlalo okomzuzwana. Singasinyusa kwakhona isantya esisezantsi sedayinaso ngokucinezela umhla.
Ungayidlala njani umdlalo wedinosaur kwi-Android
Ukudlala kwi-smartphone yethu ye-Android, eyona ndlela ikhawulezayo ukuba asifuni ukufaka nasiphi na isicelo sokwenza njalo, kukungasebenzi koqhagamshelo lwedatha kunye nonxibelelwano lweWiFi, ukuvumela imowudi yenqwelomoya.
Nje ukuba sikhuphe zombini ukunxibelelana, siza kuvula isiphequluli se-Chrome kwaye sivule ithebhu entsha, ithebhu eya kuthi ibonise ngokuthe ngqo idayinaso, ekufuneka sicofe kuyo ukuze sonwabele uT-Rex emnceda ukuba abaleke i-cacti leyo basendleleni, njengoHeidi kwiintaba zaseSwitzerland.
Kodwa ukuba asifuni ukunqamla ngokupheleleyo, sinokufaka usetyenziso lweDino T-Rex kwisixhobo sethu, umdlalo wasimahla okhoyo kwiVenkile yeGoogle Play, ngale linki ilandelayo kwaye uGoogle ngokungaqondakaliyo ugunyazise inzuzo, kuba isibonisa intengiso ukuze sikwazi ukudlala nayo. Umahluko ophambili esiwunikwe yile nguqulelo kukuba iyafumaneka kwiscreen esigcweleyo kwaye ukutsiba kuhamba kancinci.
Ungadlala njani umdlalo wedinosaur kwi-iPhone / iPad / iPod touch
Njengoko benditshilo, i-T-Rex iyafumaneka kuzo zonke iinguqulelo ze-Chrome kumaqonga apho ifumaneka khona, ke kwi-iPhone, i-iPad okanye i-iPod touch yethu siya kuba nakho ukudlala ngokuvula imo yenqwelomoya yesixhobo sethu kunye nokufikelela ithebhu entsha yesikhangeli okanye ulayishe kwakhona enye eyayivuliwe ngelo xesha.
Ukuba ufuna inguqulelo yala maxesha, enemibala kunye nezinye izilwanyana, USteve-Ukutsiba iDinosaur ye-iOS ngumdlalo owufunayo, umdlalo ofakwe kwiziko lezaziso kwaye esihlala sinendlela ekhawulezayo kunokujonga usetyenziso kwi-springboard.
Udlala njani umdlalo wedinosaur kwiPC / Mac
Kodwa ukuba into esifuna ukuyenza kukonwabela i-T-Rex kamnandi ekhayeni lethu okanye eofisini ukunqamla, singasebenzisa eli phepha le-intanethi, kwiphepha le-intanethi apho umdlalo ufumaneka khona ngaphandle kokuqhawula izixhobo zethu zonxibelelwano lwe-Intanethi. Eli phepha lewebhu liza kuvula kuphela ukubonisa umdlalo ukuba sisebenzisa isikhangeli se-Chrome.
Nangona kunjalo, sinayo le webhusayithi ibizwa ngokuba T-Rex Imbaleki. Zombini ezi nguqulelo zithembeke kakhulu kumdlalo wokuqala kwiChannel, singathi zikwinguqulelo efanayo, kodwa ngokungafaniyo newebhusayithi yangaphambili, le isebenza kwezinye izikhangeli.
Sinawo ukhetho lwendabuko ukwazi ukufikelela kwi-T-Rex ngaphandle kokufikelela kulo naliphi na iphepha lewebhu ngokuchwetheza lo myalelo ulandelayo kwibar yokukhangela ngaphandle kweempawu zokucaphula "chrome: // dino /" kwaye ucofe isithuba sendawo ukuqala umdlalo. Sinokubhala lo myalelo ulandelayo ngaphandle kwezicatshulwa "chrome: // network-error / -106" ukulungiselela ukufikelela kumdlalo.
Kwi-Intanethi sinokufumana inani elikhulu labakhangeli ngaphaya kweFirefox, iMicrosoft Edge, iSafari, iOpera nezinye, kuba zininzi ezinye iibrowser kwintengiso eziyinyani. bayifolokhwe ye-chrome, ke kule meko, inokwenzeka ngakumbi, ayisebenzi kwaphela, ukuba ngokufaka iikhowudi esikubonise zona ngentla kwindawo yedilesi uya kuba nethuba lokufikelela kwi-T-Rex.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Umdlalo weDinosaur
Awukayidlali, ukrunekile! Kuqala kutshintsha kubusuku, emva koko ii-pterodactyls ziqale ukubonakala kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo. Amanqaku angama-600 ngoku.